Gaari uu leeyahay wasiir ka tirsan xukuumadda oo ka mid noqday gawaari sharciga lagala noqday – The Voice of Northeastern Kenya
Gaari uu leeyahay wasiir ka tirsan xukuumadda oo ka mid noqday gawaari sharciga lagala noqday
Gaari noociisu yahay Range Rover oo uu leeyahay wasiirka wasaaradda biyaha iyo waraabka ee dalka Eugene Wamalwa ayaa ka mid noqday gawaari fara badan oo ay dowladda kala noqotay ogolaanshihii sharciga ee ay ku shaqeyn lahaayeen.
Waxda canshuuraha dalka ee magaceeda loo soo gaabiyo KRA ayaa fulisay howlgallo ay diiwaan galinta u gala noqotay ilaa 121 gaari oo uu ku jira gaariga Mr Wamalwa.
Dhammaan gawaarida laga ceshaday sharciga ayaa la rumeysanyahay in ay taarigada ama Number Plate-ka ku heleen si aan sharciga waafaqsaneyn.
Wararka ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegaya in Gaariga wasiirka gacanta lagu dhigay kadib markii la ogaaday in ay ku xirantahay taarigada baabuurta lagu aqoonsado oo been abuur ah.
Masuuliyiinta waaxda canshuuraha ee KRA ayaa laga soo xigtay in sidoo kale ay hadda ku raad joogaan ilaa 124 gaari oo aan wali bixin lacago canshuur ah oo marki la isu geeyo dhan 300 oo million oo shilinka dalka ah.
Howlgallada lagu ugaarsanayo gawaaridaasi ayaa hadda ka socda guud ahaan qeybaha kala duwan ee dalka.
Wali ma jiro wax war ah oo uu wasiirka biyaha iyo waraabka Eugene Wamalwa kasoo saaray arrintaan maanta ay sida weyn u hadal hayaan warbaahinta Kenya.
← Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ansixiyay isbadalkii lagu sameeyay sharciga doorashada
Laanta duulista hawada oo walaac ka muujisay burburka diyaaradaha ee kusoo kordhay dalka →